China Suction-Evacuation Access Sheath ho an'ny fampiasana tokana sy mpanamboatra | Kangyuan
•Vahaolana tanteraka ny olana amin'ny fivezivezena sy ny fiverenan'ny urika, eo ambanin'ny tsindry ratsy dia afaka misoroka ny fiverenan'ny vato izy, misoroka ny fihetsiky ny vato ary manala ny vato am-pahombiazana.
•Ahenao am-pahombiazana ny tosidran'ny pelvis voa, ny fanondrahana mitohy mandritra izany fotoana izany, afaka mamorona tsiranoka tsy miato izy mba hampihenana ny tsindry avoakan'ny vombon'ny voa.
•Izy io dia afaka misoroka ny rà mandriaka hitazomana fahitana mazava mandritra ny fomba fandidiana. Eo ambanin'ny fanondrahana sy ny suction mitohy, dia afaka manadio ny pus, ny lalan-drà sy ny vatokely, mitazona ny fandidiana amin'ny fahitana mazava, miantoka ny fiarovana ny fandidiana, ary mampihena ny fotoana fandidiana.
•Manitatra ny fanamafisana ny fidirana uretera amin'ny fomba mahomby mba hiantohana ny fandidiana tanterahina tsara, Ny famolavolana ny dilator tapered miaraka amina hydrofilika AQ dia afaka manitatra amin'ny fomba mivaingana ny fidirana uretera.
•Ny tendron'ny rakotra sy ny dilatra dia mifono hydrofilika AQ. Ny hatevin'ny famonoana hydrofilika an'ity vokatra ity dia 0.03mm ihany. Ny COF dia salan'isa 0,050 amin'ny fitsapana frithion miverimberina. Ny vokany dia mihoatra lavitra noho ireo vokatra mitovy aminy.
•Ny lalan-tsindroka tsindry ratsy dia azo ampifandraisina amin'ny fantsom-panafody tsindrona tsindry ratsy na fantsom-pivoaran'ny fantsom-pifandraisana.
•Silika famehezana plug, mora ampiasaina.
•Tsotra sy mety ny manangona ny fiarahan'ny fantsom-pohy Sheath sy ny fantsom-bozaka fanitarana.
•Ny tsindry ratsy mifehy ny lavaka, manitsy ny tsindry suction.
•Ny vatan'ny fantsona dia voamariky ny mizana, mazava sy manavaka ny loko. Afaka manampy ny dokotera hitsara ny elanelana misy ny rakotra sy ny urethra amin'ny fomba mivantana sy mety kokoa.
•Ny velaran'ny vatan'ny fantsom-boaloboka dia rakotra firakotra hydrofilika AQ, izay malama, kely ny fikororohana, ny salan'isan'ny herin'ny herin'ny COF dia 0,050, ary mora ny manitatra ny lumen amin'ny ampahany tery, mampihena ny ratra ary tsy misy fanaintainana.
•Mifandraisa tsara amin'ilay fantsona fanitarana.
•Malalaka ny tendrony dia tsy azo naratra uretra.
•Ny tendron'ny dilator dia mifono hydrofilika AQ. Ny endriny dia tendrony taper. Izy io dia afaka manitatra miandalana amin'ny alàlan'ny fikorontanana sy ny fitrandrahana mba hamorona fantsom-pandidiana feno sy mahazatra kokoa, mora ampiasaina ny ureteroscope malefaka, miaro ureter mandritra ny fifanakalozana fitaovana miverimberina mandritra ny ureteroscopy.
Teo aloha: Suction Catheter
Manaraka: Tube Silom-vavony
saron-tseranana fidirana amin'ny fivoahana
Akanjo fitokana-monina fitsaboana
Hamafisin'ny laryngeal mask Airway
Kit Catheterization Urethral azo ampiasaina
Tube Endotracheal nohamafisina
Laryngeal Mask Airway miaraka amin'ny Epiglottis Bar